सावधान ! बैंकमा ढुक्क संग जम्मा गरिएको पैसा, नयाँ तरिकाबाट यसरि चो’रि हुदै ….
काठमाडौं। तपाई बैंकको एसएसएस सेवा लिन छुटाउनु भएको त छैन रु छुटाएको भए तत्कालै जोडिहाल्नुस् । नत्र बैंकको मौज्दात रकम अरु कसैले लगिसकेको हुनसक्छ । यसरी लगेको पैसा न बैंकलाई थाहा हुन्छ न तपाईलाई ।
काठमाडौँमा यस्तै एउटा ठूलो घट ना सार्वजनिक भएको छ । जुन तपाईले पत्याउनै सक्नुहुन्न । रकम सुरक्षित हुन्छ र चाहेको बेलामा निकाल्न पाइन्छ भनेर ढुक्कसँग बैंकमा पैसा राखिन्छ तर बैंकको कर्मचारीको लापर्वाहीले त्यो पैसा सजिलै अर्कैले निकालेर लान्छ । बैंकको सेवामा प्रश्न चिह्न लाग्ने गरी एउटा गिरोहले यसैगरी अर्कै व्यक्तिको खातामा रहेको झण्डै रु २० लाख नगद निकाल्न सफल भएको छ । कुनै प्रविधिको प्रयोग विनै चेकमार्फत यसरी सजिलै पैसा निकालेर लगिन्छ भने अब बैंकलाई कसरी विश्वास गर्ने रु ग’म्भिर प्रश्न ख’डा भएको छ ।
घ’टना आइतबारको भए पनि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले आज सार्वजनिक गर्दै फरक खालको गिरोह देखिएको जनाएको छ । उक्त घ’टनामा संलग्न छ जनालाई प’क्राउ गरी उनीहरुबाटरु रु १८ लाख ५० हजार बरामद गरिएको छ भने केही पैसा उनीहरुबीच बाँडेको फेला परेको छ।
यसरी भएको थियो घ’टना
आइतबार दिउँसो करीब २ बजे जनता बैंक ग्वार्को शाखामा गोपालमान राजवाहकको नाममा चेकबुक हराएको भन्दै नयाँ चेकबुक बनाउन निवेदन आयो । बैंकका कर्मचारीले २.३० बजे सजिलै चेकबुक बनाएर पठाइदिए । त्यहीँ शाखाबाट पैसा निकाल्दा श’ङ्का हुने देखेर उक्त गि’रोहले दिउँसो ३.३० बजे बानेश्वरस्थित उक्त बैंकको शाखाबाट चेकमार्फत रु नौ लाख ९९ हजार पैसा निकाले । दिउँसोको काउण्टर ब’न्द भएपछि साँझ दुईवटा चेकमार्फत उनीहरुले राजवाहककै खातबाट रु पाँच÷पाँच लाख नगद निकाले ।
यसरी क्रमैसँग पैसा निकालेको एसएमएस आउँदा राजवाहक छक्क परे । “कसैलाई चेक दिएकै छैन, एटिएम कार्ड पनि दिएको छैन कसरी पैसा निस्कियो”, शं’का लागेर उक्त एसएसएससहित राजवाहक महानगरीय प्रहरी पसिरको सम्पर्कमा आए पछि खुल्यो अनौठो र’हस्य ।
तत्कालै प्रहरी हाइअलट भयो । उनीहरुको निगरानी शुरु भयो। सबै बैंकलाई सर्कुलर गरेर प्रहरीले त्यस्ता व्याक्ति आउने बित्तिकै खबर गर्न भनियो । राजवाहकको खातामा रु पाँच लाख बाँकी रहेको थाहा पाएका गि’रोह भोलिपल्ट सोमबार त्यसैगरी तीन वटा चेक बनाएर बैंकबाट पैसा निकाल्ने क्रममा न्यूरोडबाट प’क्राउ गर्न सफल भएको परिसरका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले बताए ।
प’क्राउ पर्नेमा काभ्रेपलाञ्चोक पाँचखाल घर भई कालीमाटी बस्दै आएका १९ वर्षका सुवास श्रेष्ठ, सोही ठाउँ बस्ने १९ वर्षका कुमार तामाङ, १८ वर्षका मनिष घिमिरे, २१ वर्षका अञ्जन बराल, बाग्लुङ गलकोटका २५ वर्षीय सुमन पौडेल र सिन्धुपाल्चोक ज्यामिरे घर भई काठमाडौँ बस्ने ३० वर्षका गोविन्द घिमिरे रहेका छन् । उनीहरुलाई बैंकिङ क’सुरमा मु’द्दा दर्ता गरी अनुसन्धान थालिएको परिसरले जनाएको छ ।
उनीहरुको साथबाट प्रहरीले नगद रु १८ हजार ५०० सहित विभिन्न व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि २९० थान, सयौँ व्यक्तिको बैंकमा रहेको रकम उल्लेख भएको २६ वटा हाजिरीखाता खोल्न फोटो टाँसेको फारम ३०० वटा, विभिन्न व्यक्तिको बैंक स्टेटमेन्ट १९५ वटा, विभिन्न व्यक्तिको नाममा जनता बैंकको ५७ वटा चेकबुक ब’रामद गरिएको छ ।
यस्तै ज्योति बैंक, एभरेष्ट बैंक, माछापुच्छ«बैंक, मुक्तिनाथ बैंक, एनआइसी एशिया बैंकका दर्जनौँ चेकबुक पनि फेला परेको छ । उनीहरुका साथबाट ८२५ जनाको फोटो, एनआइसी एशिया बैंकको ८२ वटा र अन्य बैंकको सात गरी ८९ वटा एक्टिभ भएको एटिएम कार्ड फेला परेको छ । रकम उल्लेख गरेर साट्न ठिक्क पारिएको अवस्थाको ३२९ वटा चेक पनि ब’रामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । परिसरका प्रहरी नायब उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटी उनीहरुले खातावालाको सबै विवरण पहिचान गरेर नक्कली हस्ताक्षर दु’रुस्त पारी रकम निकाल्ने गरेको पाइएको बताए ।
“सामान्य दुई÷तीन लाख पैसा निकाल्दा नै बैंकले खातावालालाई फोन गर्छ, तर यहाँ झण्डै १० लाख निकाल्दा पनि खातावालाई जानकारी नहुनुले कर्मचारीको मि’ले’मतोको आ’शंकामा अनुसन्धान जारी छ”, बोगटीले भने । उनका अनुसार दिनभरि गतिविधि गर्ने र रातिमा उनीहरुले न’क्कली हस्ताक्षर बनाउन सिक्ने गरेका थिए ।
हस्ताक्षर बनाउन प्रयोग भएका दर्जनौँ हाजिरीखातासमेत ब’रामद भएको छ । उनले केही कागजातको अनुसन्धान भइरहेको र अझै दुई बोरा कागज हेर्न बाँकी नै रहेको बताए । अहिले एक व्यक्तिको मात्रै पैसा लगेको पाइएकाले उनीहरुले अन्य धेरै व्यक्तिको रकम लगेको हुनसक्ने आ’शङ्का प्रहरीको छ ।
प्रकाशित मिति January 5, 2020